Bruno Fernandes oo hoggaaminaya xiddigaha doonaya in xilka laga tuuro tababaraha Man United ee Ole Gunnar Solskjaer… (Miyuu ku jiraa CR7?) – Gool FM
(Manchester) 26 Okt 2021. Sida wararku ay tilmaamayaan kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la filayaa inay shaqada ka cayrin doono Macallinkeeda Ole Gunnar Solskjaer ka hor maalinta Jimcaha ah.
Iyadoo la filayo in macallin cusub uu hoggaamin doono Manchester United kulanka Sabtida ee hroyaalka Premier League ayaa haatan waxaa soo baxaya Magacyada xiddigaha ka tirsan kooxda ee doonaya in shaqada laga ceyriyo Macallin Ole.
Ole Gunnar Solskjaer ayay shaqadiisu mugdi gashay markii iyagoo jooga gurigooda Old Trafford ay kooxda Liverpool ku bahdishay 5-0.
Man United oo horay u sheegtay inay kalsoonida siisay Solskjaer ayaa haatan la warinayaa inay go’aankaas beddeshay oo ay iminka go’aansatay inay shaqada ka cayriso Macallinka reer Norway, iyadoo sababta ugu weyn ay tahay inuu lumiyey kalsoonida qolka labbiska, waxaana xiddigaha kooxda qaarkood ay doonayaan in hoggaamiyahan loo tilmaamo albaabka looga baxo Old Trafford.
Warbaahinta Ingiriiska ee ciyaaraha ka faalloota qaarkood ayaa qoraya in tiro ka mid ah xiddigaha waa weyn ee Kooxda Manchester United ay doonayaan in shaqada laga cayriyo Ole kaddib guuldarrooyinkii ay kala kulmeen Leicester City iyo Liverpool.
Bruno Fernandes ayaa la sheegay in xiddigahaas uu hoggaaminaya, iyadoo todobaadyadii ugu dambeeyey xiddiga reer Portugal laga dareemayey inaysay isku wanaagsanayn Solskjaer, isla markaana uu warbaahinta u sheegay in loo baahan yahay in tababaraha iyo ku xigeennadiisu ay sameeyaan horumar.
Si kastaba ha ahaatee, kaliya 26-sano jirkaan ma’ahan ciyaaryahanka kaliya ee saluugsan Solskjaer, laakiin waxaa jira tuhun kale oo ah inay fikirkan la qabaan xiddigaha waa weyn ee Kooxda Cristiano Ronaldo, Paul Pogba iyo Edinson Cavani.
RASMI: Kooxda AC Milan oo bayaan ka soo saartay Brahim Diaz oo uu haleelay Korona Fayras… (Miyuu ka soo kabsaday caabuqa?)